လိုအပ်ချက်၃ခု ~ Nge Naing
Tuesday, July 06, 2010 Nge Naing7comments
Forward mail က ရောက်လာတဲ့ စာတိုလေးကို သဘောကျလို့ ဘလော့ဂ်မှာ ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ ရှိတဲ့အတွက် အကြိုက်ဆိုတာလည်း တယောက်နဲ့တယောက် တူနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခု ဒီစာထဲက ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှု ဒီသုံးမျိုးအနက် တခုခုကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ရတော့မယ် ဆိုရင်လည်း တယောက်နဲ့တယောက် ရွေးချယ်မှု တူချင်မှ တူလိမ့်မယ်။ ကျွန်မဆိုရင်တော့ ဒီစာတိုလေးထဲက တင်ပြထားတာလေးကို လက်ခံတယ်၊ သဘောကျတယ် ဒါကြောင့် ကျွန်မ မအားလို့ ပို့စ်အသစ် မတင်ဖြစ်သေးပေမဲ့ ဘလော့ဂ်ကို ရောက်လာပြီး တိုက်ပွဲဖြစ်လို့ နှုတ်မဆက်ဘဲ တိတ်တိတ်လေး ပြန်သွားကြတဲ့ ဘလော့ဂ်မိတ်ဆွေများအတွက် နောက်တခါ ပြန်လာရင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ဖတ်လို့ရအောင် ပြန်ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ ဆိုရင်ကော ဒီသုံးမျိုးမှာ ဘာကိုရွေးချယ်ကြမလဲ။
တခါက အိမ်ရှင်မတဦးသည် အိမ်ရှေ့တွင် မုတ်ဆိတ်ဖြူနှင့် အဘိုးအိုသုံးဦး
အိမ်ထဲဝင်ပြီး တခုခု သုံးဆောင်ပါဦးလား" ဟု သူမ လောကွတ်ပြုသည်။
"အိမ်ရှင်ယောက်ျားရှိနေလား" အဘိုးအိုက မေးသည်။"မရှိဘူး...အပြင်သွားလိုက်တယ်"
အိမ်ရှင်မက အဘိုးအို သုံးဦးအား အိမ်ထဲဝင်ခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပြန်သည်။
"ဘာဖြစ်လို့လဲ...အဘိုး" အိမ်ရှင်မက တအံတသြနှင့် မေးသည်။
"သူ့နာမည်က ဓနဥစ္စာတဲ့" အဘိုးအိုတဦးက အခြားတဦးကို ထိုးပြပြီးပြောသည်။ ဆက်၍
"သူကတော့ အောင်မြင်ခြင်း၊ အဘိုးက ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ အိမ်ထဲကို ဘယ်သူအရင်
၀င်ရမလဲဆိုတာ တူမလေးယောက်ျားနဲ့ အရင် သွားတိုင်ပင်ကြည့်လိုက်ဦး"
ထောင့်တနေရာတွင် ထိုင်ပြီး သူတို့ပြောသော စကားကို နားထောင်နေသည့်
အိမ်ထဲဝင်သည်နှင့် ကျန်အဘိုးအို နှစ်ဦးက လိုက်ဝင်လာသည်။
ကျန်တဲ့နှစ်ဦးက လိုက်ဝင်လို့မရဘူး။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အရင်ဖိတ်မယ်ဆိုရင်
သူဘယ်ကိုသွားသွား ကျန်တဲ့နှစ်ဦးက လိုက်ကိုလိုက်ရတယ်။ ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်
အဘိုးအို တဦးက ရှင်းပြသည်။
(copy from letmakeasulike.ning.com)
Posted in: အချစ်/မေတ္တာ,အထွေထွေ
July 6, 2010 at 4:38 PM Reply
July 6, 2010 at 5:04 PM Reply
Thanks for your sharing. Now I am in small village at French and Spain border area with my on duty even though school holidays because I have to plan to go back our mother land in next month. Due Aquaculture Conference was transfered to next year. Hope to see you.
Always wishing you and your family to be happy, healthy, safety.
July 6, 2010 at 10:01 PM Reply
ချစ်ခြင်းမေတ္တာက လူတိုင်းလိုလို လိုချင်လို့ နေမယ်
ပိုက်ဆံပေးဝယ်စရာတော့ မလိုပေမယ့် ရှားပါးတယ်။
မအယ်ကတော့ လောဘကြီးတယ်။ ၃ခုလုံး လိုချင်တယ်။:)
July 6, 2010 at 11:12 PM Reply
July 6, 2010 at 11:13 PM Reply
ဒီလောက်အလွယ်တကူ ရနိုင်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေက တချို့လူတွေအတွက်ဘာလို့ ရှားပါး ရတာပါလိမ့်
July 6, 2010 at 11:53 PM Reply
အရင်တုန်းက ဖတ်ဘူးတယ်ဗျ။ အဲ့ဒီတုန်းက ဖတ်လို့ မဆုံးခင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အရင်ဖိတ်ရမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားခဲ့တယ်။ ပုံပြင်တွေ ဘာတွေက ဒါကို ဦးစားပေးတာကိုး။
July 7, 2010 at 12:03 AM Reply
အောင်မြင်ကျော်ကြားတော့လည်း ထင်ပေါ်ရင် စဉ်တော်ကကောက်ဆိုတဲ့ စကားပုံအတိုင်း ငွေကြေးဓန ကြွယ်ဝသလို ချစ်သူခင်သူတွေလည်း ရဖို့လွယ်ပါတယ်။ ဓနဥစ္စာ ရှိသူများအတွက်လည်း ထိုနည်း၎င်းပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာက လက်နှင့်ဆုပ်ကိုင်ပြသလို့ မရတော့ လက်တွေ့သိပ်မရှိလို့ အခုခေတ်မှာ ရွေးမည့်သူ ရှားပါတယ်။